डायरीः यहाँ छैन कोरोना, निर्धक्क काममा लागेका छन् मानिसहरू - Everest Dainik - News from Nepal
डायरीः यहाँ छैन कोरोना, निर्धक्क काममा लागेका छन् मानिसहरू
२०७७, १ असार सोमबार
गोकर्ण भट्ट, सुर्नया बैतडी । कमल साउजीको सानो होटलमा भीड छ । गाउँमा साँझबिहान स–साना होटलमा मानिसहरू झुम्मिनु र तम्बाखु चुरोटसँगै देश दुनियाँका कुरा गर्नु सामान्य नै हो ।
राजनीति यहाँ पनि छ । देशका सबै घटनामा उनीहरू आ–आफ्ना तर्क राख्छन् । यी तर्कहरु बहसमा जित्नैपर्ने प्रकृतिका हुन्छन् ।
‘ओलीले देश डुबायो’, एउटाले तर्क गर्याे ।
‘डुबायो कि जोगायो, तिम्रा नेताले चैं के नापेका छन्,र ?’ अघि प्रश्न गर्नेको हातबाट हुक्का तान्दै अर्काेले भन्यो ।
अनि सुरु भयो बहस । यी बहसहरू अचम्मकै हुन्छन् । त्यहाँ किंवदन्तिहरू तर्कका रूपमा आउँछन् । दुइतीन चोटी हुम्का जोतिन्छ । साँझ पर्छ अनि सबै बाटो लाग्छन् ।
यो नियमित प्रक्रिया हो । एउटा रमाईलो पनि ।
र, आज भने साहुजिको होटलमा कोरोना छिरेको छ ।
‘क्वारेन्टाइनमा मान्छे थपिए, के जाति छैन रे, जाँच गर्न पाएनन्’, एकजनाले भन्यो ।
‘यो कोरोना सोरोना केही होइन । बजेट खाने मेलो हो’, लगत्तै प्रत्युत्तर सुनियो ।
अचम्म के भने उनीहरु कोरोनाको कुरा यसरी गर्छन् मानौं साँच्चिकै कोरोना एउटा ईतिहासको कथा हो ।
याे पनि पढ्नुस कहिले तयार होला कोरोना भाइरसको खोप?
उनीहरूको कुरा चलेकै बेला आधा दर्जन महिला आउँछन् । सबैको हातमा नाम्लो छ ।
उनीहरूले एकएक कट्टा सिमेन्टको भारी बोक्छन् र लाग्छन गन्तव्यतिर ।
यो दैनिकी प्रतिदिन चलिरहन्छ । मानिसहरूको पुरानै डायरिले यो कालमा पनि निरन्तरता पाएको छ ।
यो बैतडी जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र हो ।
काठमाडौंको कोरोना त्रासबीच म यहाँ आइपुगेको छु ।
खोडपे बजारबाट बझाङ जाने सडकमा केही किलोमिटर गाडीमा हिंडेपछि एउटा मोड आउँछ । म त्यहीँ ढोल्या मोडबाट तल पश्चिमतर्फ ओरालो झरेर कठमडा गाउँ आइपुगेको छु ।
हामी आधा दर्जनको संख्यामा छौं । डाक्टरदेखि पत्रकारसम्म ।
पत्रकार गोकर्ण भट्ट
शुरूमा गाउँ छिर्दा असहज लागेको थियो हामीलाई । तर अचम्म, गाउँ पुग्दा त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति न त अस्वीकार्य भयो न विष्मयको विषय नै । उल्टो, हामी गाउँ पुग्दा स्वागत गरे उनीहरूले ।
काठमाडौंको मानसिक यातनाबाट टाढा प्रकृतिको काखमा न्यानो सत्कार पाउनु कोरोना समयको ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ । चारदिन कठमडा बस्दा त्यहाँ कोरोना छिरेन । न कोरोनाको त्रास नै । यदाकदा टेलिभिजनमा समाचारबाट कोरोना सुनिन्छ, तर, मानिसहरुको जीवनमा त्यस्तो उल्लेख्य असर गरेको देखिन्न ।
मानिसहरु आफ्नै दैनिकीमा व्यस्त छन् । रोपाईं र मकै गोडने चटारो छ । सडकदेखि अन्य निर्माणका काममा ज्यालादारी गर्न व्यस्त छन् केही महिलाहरू । युवक पुरुषहरुको त्यति उपस्थिति देखिन्न ।
अचम्म, कोरोना कालमा शिक्षा व्यस्थापनबारे ठूल्ठूला बहस चलेको बेला यो क्षेत्रमा रहेको एकमात्र बोर्डिङ स्कुल हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
स्वास्थ्यचौकीमा कोरोनाका पोष्टर देखिन्छन् । तर त्यहाँ कोरोनाबारे सोध्ने या जाँचको कुरा गर्न कोहि आउँदैनन ।
कठमडा मात्रै होइन, सुरनया गाउँपालिकाका अधिकांश गाउँहरुमा जनताको दैनिकीमा कुनै असहजता देखिंदैन । पसल खुलेकै छन् । बाहिरबाट आउने सबैलाई गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । कतिपय भने क्वारेन्टाइन अवधि काटेर घर फर्किसकेका छन् ।
त्यसो त बैतडी जिल्ला भारतबाट नेपाल फर्किने प्रवासी कामदारहरुको उल्लेख्य संख्या भएको जिल्ला हो । यहाँ हजारौ मानिसहरू भारतका विभिन्न भेगबाट गाउँ फर्केका छन् । अहिले पनि हजार बढी क्वारेन्टाइनमै होलान । तर जोखिमको अवस्था भने प्रचार गरेजस्तो छैन ।
याे पनि पढ्नुस बिहानै थपिए ६४ कोरोना संक्रमित
केही गाउँहरुमा जोखिम अवश्य छ तर जिल्लाका कतिपय क्षेत्र सुरक्षित छन् । स्थानीय तहहरुले पर्याप्त कोशिस गरेका छन् ।
अहिले भने हामीले शुरूको गन्तव्य कठमडा छोडेर पश्चिमतर्फ यात्रा शुरू गरेका छौं । यो गाउँपालिकाका सबै वडाका प्रतिनिधि महिला तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग हाम्रो साक्षात्कार हुनेछ । यो गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष र नेकपाले उपाध्यक्षमा जितेको थियो । गाउँपालिकामा दुबै सक्रिय भूमिकामा देखिन्छन् । गाउँपालिकामा कोरोनाबारे आवश्यक सतर्कता छ तर अनावश्यक त्रास सिर्जना हुन दिइएको छैन ।
यहाँ सबै गाउँमा नेटवर्कले साथ दिन्न । तर लाग्छ, कहिलेकतहि नेटवर्कको अभाव पनि वरदान हुँदो रहेछ । भागदौड, व्यस्तता भन्दा टाढाको संसार । त्यसैले काडमाडौंमा लक डाउनका ८० भन्दा बढी दिनमा भोग्नुपरेको न्यास्रोपना यहाँ ४ दिन बस्दा मेटिएको छ ।
कोरोना याममा पनि यहाँ जीवन भेटिन्छ । दुख छ, कष्ट छ तर त्रास छैन, भय छैन । संकट छ र, पनि मानिसहरु आत्मैदेखि मुस्कुराउन भने छोडेका छैनन् ।
ट्याग्स: कोरोना, डायरी, बैतडी
प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनीबीच फोन संवाद
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ठाकुर पक्ष सर्वोच्च जाने
नेपालमा कोरोनाको डेल्टा प्रजातिको नयाँ म्युटेन्ट भेटियो
लुम्बिनीका ३ सांसदलाई निलम्बन गर्ने जसपाको निर्णय
बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय
योजना आयोगको उपाध्यक्षमा विश्व पौडेललाई नियुक्त
लुम्बिनीमा अमिक शेरचन र गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख नियुक्त
बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषद बैठक शुरु, ओली सरकारले गरेका केही नियुक्ती खारेज हुनसक्ने
11 ACC Players on Butkus and Thorpe Award Watch Lists
GREENSBORO, N.C. (theACC.com) – Seven Atlantic Coast Conference football players have been named to the Butkus Award Watch List, which was announced Monday. The award honors the nation's best linebacker. Four more ACC players were selected ...
Cryptocurrency pump-and-dump schemes: Everything you should know
Crypto pump-and-dump schemes are designed to take advantage of people while making some big money for scammers. They generally involve influencers who receive financial incentives for telling people to buyacertain digital coin in order to raise its value.
Deshaun Watson news: Biggest questions, from what's next for Texans to trade fits and more
Although Watson is on the team's roster, he's facing 22 civil lawsuits with allegations of sexual assault and inappropriate behavior. Watson asked foratrade in January, before the lawsuits were filed, because he wasn't happy with the direction of the team was ...
A Texas-OU move to SEC isn't about the greater good for college sports, but rather who gets to be the best
The Sooners between the hedges? The Crimson Tide rolling into Austin? All whileaBig 12 that was not actually 12, and increasingly not all that Big, now finds itself falling back and digging in its boots to ward off conference raiders hailing from every direction ...
Bicycle-part arches made by Iowa artist to welcome RAGBRAI riders into Waterloo
Waterloo is welcoming RAGBRAI riders into the city withanew public art piece made from old bicycle parts. It'sapair of sculptures that together form an archway through which the more than 15,000 riders on the Register's Annual Great Bicycle Ride Across ...